trash-ehl: raira iyo inogona kudzivirira kurasikirwa mune yako distro | Linux Vakapindwa muropa
marara-ehl mutengi kuti agadzirise iyo yekudzokorora bin kubva kune yekuraira tambo. Kana iwe ukavhara rm kana kugadzira alias kuitira kuti kana iwe uchishandisa rm iwe uri kunyatso kushandisa marara-ehl, iri nzira yakanaka yekudzivirira kurasikirwa kwedata. Kazhinji iwe unodzima mamwe mafaera iwe ausina kunyatsoda kudzima kana iwe uchizviita zvisina hanya uye ipapo hauchakwanise kuzvidzorera. Nenzira iyi, kana iwe ukadzima chimwe chinhu nemarara-ehl, icharamba iri mumarara.
Kana iwe uchida kuvadzosa zvinogona kuitwa nyore. Uye zvakare, marara-ehl anozorangarira zuva rakabviswa imwe faira, mvumo yaro, nzira kwayakanga iri isati yabviswa, uye saka unogona kuvapora sezvavakanga vakaita nenzira yakapusa. Chinhu icho ne rm chausingazokwanise kuita, uye kana ukangozvibvisa netsaona unofanirwa kushandisa maturusi ekuongorora kuti udzorere kana zvichikwanisika ...
Kuisa marara-ehl kuri nyore kwazvo kana iwe ukashandisa wako package package kubva kune yako yaunofarira distro. Semuenzaniso, unogona kushandisa apt-tora kuisa marara-ehl yeDEB distros. Kamwe pasuru yacho yaiswa, inokupa iwe mirairo iyi:
tsvina-isa: bvisa mafaera uye madhairekitori
tsvina-isina chinhu: bvisa tsvina
marara-rondedzero: nyora mafaera ari mumarara
marara-dzosera: dzosera mafaera ari mumarara
trash-rm: wega bvisa yakatarwa faira iri mumarara
La trash-ehl chishandiso chiri Python yakavakirwa, uye iwe unogona zvakare kuiisa kubva kunobva. Maitiro acho akajairika kune ese distros uye iwe unogona kuzviita nekutevera aya matanho akareruka:
Paunenge waiswa, unogona kushandisa iyo inowanikwa mirairo kubva kumagumo nenzira yakapusa. Semuenzaniso, kutumira chimwe chinhu kumarara, pachinzvimbo chekushandisa rm (izvo zvingave, musimboti, zvisingawanikwe), unogona kushandisa iyi imwe sarudzo:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » trash-ehl: raira iyo inogona kudzivirira kurasikirwa mune yako distro